यी २५ वर्षकी युवतीले जन्माइदिइन् आफ्नै बुवाको बच्चा ! - Samachar Post Dainik
यी २५ वर्षकी युवतीले जन्माइदिइन् आफ्नै बुवाको बच्चा !
काठमाडौं । पिता–पुत्रीको सम्बन्ध निकै पवित्र तथा मर्यादायुक्त सम्बन्ध हो । कुनै छोरीले आफ्नो बाबुको सन्तान जन्माउने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर बेलायतमा भने एउटा यस्तै घटना भएको छ ।बेलायतमा एक २५ वर्षकी युवतीले आफ्नो बुवाको सन्तान जन्माइदिएकी छिन् । वास्तवमा ती युवतीले सरोगेट मदर अर्थात् भाडाको कोख दिएर आफ्नो सौतेलो बुवाको लागि बच्चा जन्माइदिएकी हुन् ।
सौतेलो बुवाको शुक्रकिटसँग ती युवतीको डिम्बको मिलन गराई भ्रुण तयार पारेर उनमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको थियो ।ती युवतीको नाम होली हो र उनी अविवाहित छिन् । आफ्नी आमाका कारण उनले सेरोगेट मदर बन्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।उनकी आमाले एन्ड्रयू नामका एक पुरुषसँग बिहे गरेकी थिइन् । नयाँ बिहेपछि आफ्नो नयाँ पतिसँग उनले बच्चा जन्माउन चाहन्थिन् तर परिवार नियोजन गराएका कारण
उनले बच्चा जन्माउन सम्भव थिएन । कृत्रिम गर्भाधान समेत सफल भएन । त्यसैले उनले आमाको खुसीका लागि सौतेलो बुवाको शुक्रकिटबाट गर्भाधान गराएर बच्चा जन्माइदिएकी हुन् ।आमाका लागि स्वस्थ छोरी जन्माइदिएपछि उनले त्यो बच्चा आमालाई सुम्पिएकी छिन् । सुरुमा त परिवारले त्यस प्रकारले जन्मिएको बच्चा ग्रहण गर्न अनकनाए । तर कुरा बुझाएसँगै बच्चीलाई अपनाउन सबै राजी भए ।
आफैंले जन्माइदिएको आफ्नो आमा तथा सौतेलो बुवाको छोरीलाई आफूले बहिनी मानेर माया गर्ने होली बताउँछिन् ।–एजेन्सी
प्रकाशित मिति १४ पुष २०७७, मंगलवार ०४:४०